एक विवाह गराए बापत १६ करोड तलब
एजेन्सी । आजको समयमा ‘वेडिंग प्लानर’ अर्थात विवाह योजनाकारको व्यवसाय राम्रो फस्टाएको छ । जुन परिवारसँग समय कम हुन्छ या उनीहरुले विवाहको सबै काम समयमा गर्न नसक्ने भएपछि विवाह योजनाकारलाई विवाहको सम्पूर्ण जिम्मा दिने गर्छन् ।
मंगल ग्रहका यी बालक !
एजेन्सी । अहिलेको युगमा सबैको ध्यान इन्टरनेटतिर रहेको छ । यसले मानिसको जीवन शैलीमा ल्याएको परिवर्तनलाई लिएर विश्लेषकहरुको आफ्नै टिप्पणी पनि रहेको छ ।
यस्तो कम्पनी, जहाँ कर्मचारी स्वयं तलब तोक्छन् र आफ्नै मर्जीले तलब बढाउँछन्
एजेन्सी । कुनैपनि कम्पनी जब कर्मचारीलाइए जागिरमा राख्ने गर्दछन् तब आफ्नो हिसाबले कर्मचारीको तलब तोक्ने गर्दछन् । तर तपाइलाई सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ की लण्डनमा यस्तो कम्पनी रहेको छ, जसमा काम गर्ने कर्मचारी स्वयं आफ्नो तलब तोक्ने गर्छन र आफ्नो मर्जीले तलब वृद्धि पनि गर्छन् ।
अनौठा कानून रहेका देशहरु, जहाँ चुइंगमदेखि लिएर नीलो जिन्स सम्म प्रतिबन्ध
१ टन वजन भएकोे विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सुनको सिक्का
एजेन्सी । तपाईलाई कैयौं यस्ता वस्तुहरुबारे जानकारी होला जुन विश्वका सबैभन्दा ठूलो वस्तु हुन् । तर के तपाईले विश्वको सबैभन्दा ठूलो सुनको सिक्का देख्नुभएको या सुन्नुभएको छ ? एक टन वजनी विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सिक्का पर्थ मिन्टमा निर्माण भएको छ ।
७४ वर्षीया वृद्धाले जुम्ल्याहा बच्चा जन्माएपछि...
एजेन्सी । आन्ध्र प्रदेशको गुन्टुर जिल्लामा एक ७४ वार्षीया वृद्धले जुम्ल्याहा बालिकाहरुको जन्म दिएकी छन् । वृद्धको नाम मंगयम्मा हो, जसले अहिल्या नर्सिङ होममा बालिकाहरुको जन्म दिइन् ।
एउटै विवाह मण्डपमा २ गर्लफ्रेन्डसँग बिहे गरेपछि...
एजेन्सी । इन्डोनेशियामा एक अचम्मको घटना बाहिर आएको छ । जसमा एक व्यक्तिले एकै मण्डपमा दुई महिलासँग बिहे गरेकी छिन् । सबैभन्दा अचम्मको कुरा के रहेको छ भने, दुबै महिलाहरु त्यस व्यक्तिका गलफ्रेन्ड हुन् र बिहेमा दुवै खुसी थिए ।